Angletera: Famongorana ny fomba fijery manavakava-bolonkoditra ataon’ny fampitam-baovao amin’ireo vahoaka indizeny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2021 4:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Español, srpski, বাংলা, 日本語, English
(Lahatsoratra tamin'ny volana Martsa 2009)
Rehefa nahasarika ny sain'izao tontolo izao bebe kokoa ny olan'ny vahoaka indizeny dia namoaka karazana boky vaovao mandrara ny fampiasana ny fomba fiteny roa izay nolazain'ny mpikatroka fa manilika ary manaratsy ireo vahoaka indizeny ny gazety mpivoaka isan'andro Britanika The Guardian sy ny isa-kerinandro The Observer.
Fanentanana Survival International mba hamongorana ny fanavakavaham-bolonkoditra atao amin'ny vahoaka foko
Tarihin'ny Survival International ny fanentanana manohitra ny fampiasana ny teny hoe “olona fahiny” sy “vanim-potoanan'ny vato”. Mandrisika ireo izay manohana azy hitandrina amin'ny famaritana ny olona foko amin'ny fampitam-baovao, ary handefa karatra paositaly na karatra elektronika araka izay azo atao any amin'ny lehiben'ny toniandahatsoratra, amin'ny alàlan'ny tranokalany ny fanentanana ataon'izy ireo.
Mitatitra ny adihevitra mandeha ao amin'ny fampitam-baovao ao Angletera amin'ny fomba hitondrana ireo vahoaka indizeny araka ny fomba fijerin'ny mpanao gazety ny bilaogy Survival International :
Nitatitra ny fomba fijery manan-danja avy amin'i Stephen Corry, talen'ny Survival, ny gazety Britanika The Independent. Hatramin'ny nirotsahan'ny Michael Buerk, izay niasa tao amin'ny BBC, dia niova endrika vaovao ny adihevitra momba ny fampiasana teny toa ny hoe “ntaolo” hilazana ireo vahoaka foko.
[…] Ny gazety The Guardian sy The Observer dia tsy mankasitraka ny fampiasana ny teny toa ny hoe “ntaolo” sy ny hoe “vanim-potoanan'ny vato” ao amin'ny bokin-dry zareo, izay ampiasaina.
Namerina ihany koa ilay vaovao ny The Wild Hunt, bilaogin'ilay “mpikatroka mpino andriamanitra maro” Jason Pitzl-Waters:
Nahombiazana vao haingana ny fanentanana “Fongory izany” nataon'ny Survival rehefa nandresy lahatra ny gazety Britanika The Guardian sy The Observer mba hampiato ny fampiasana ny teny hoe “ntaolo” sy ny hoe “vanim-potoanan'ny vato” rehefa miresaka ny vahoaka foko izy ireo.
Hoy i Lonnie, naneho hevitra momba ity lahatsoratra ity hoe:
Samy avy amin'ny fotokevitry ny fivoarana efa lany andro ny teny hoe “ntaolo” sy ny hoe “vanim-potoan'ny vato”. Tsy misy fomba fiaina na olona “ntaolo”. Fomba fahaizana maka volontany amin'ny tontolo iainana ny fivoarana, fa tsy ambaratonga, noho izany tsy misy fomba handrosoana amin'ny hoe “ntaolo” mankany amin'ny “mandroso”.
Raha fintinina, raha ny tena izy, fanehoana ihany ny foko iray no ivo na ny olona ivon'ny hafa [na ambonin'ny hafa] tamin'ny taonjato faha-19 ireo teny ireo, izay nolavin'ny manam-pahaizana sy ny mpandinika ny olombelona efa hatry ny ela fa tsy mitombina.